Krita bịarutere na beta maka mbadamba gam akporo na Chromebooks ịbịaru | Gam akporosis
KRITA bu ihe eji emeghe ihe ohuru nke emeghe ihe edere maka mbadamba gam akporo na Chromebooks
Anyị agaghị agbaghara oge iji kwuo maka ya ihe osise ọhụụ na-akpọ KRITA. Na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ọ bụ oghe oghe na ihe niile ọ pụtara. N'ezie, ọ bụ na beta ma ugbu a dakọtara na mbadamba gam akporo na Chromebooks. Nke pụtara na ịchọrọ nnukwu ihuenyo ka ị nwee ike ịmalite ịbịaru ya.
Ọ bụrụ na anyị kwuo na anyị enweghị ike ịhapụ oge ahụ, ọ bụ n'ihi na ọ dịghị mfe ịchọta ngwa ngwa emeghe iji jiri ya wee see. Na Adobe Photoshop na-achị, n’agbanyeghi na iji uzo ozo di nkpa dika Affinity, ngwa ndi di ka nke a, na ndi ozo site na ngwa ekwenti di nkpa.
1 Mkpa nke imeghe isi
2 Mepụtara ya site na KDE, mba ofesi ngwanrọ n'efu
3 Ihe omuma ya
Mkpa nke imeghe isi
Nyaahụ anyị gosiri gị nnukwu emeghe isi-eme anatara ngwa nke anyi ji tinye kwa uda olu na udiri software a. A software na ị nwere ike ịga na isi mmalite ya iji lee anya ma hụ na ọ nweghị ihe ọ bụla "dị egwu", na ọ na-enye ndị ọzọ ohere imeziwanye ya na koodu ha gbakwunye na Github; n'agbanyeghị ụzọ anyị nwere n'ụzọ zuru ezu ọtọ gam akporo ngwa.
Ọ bụrụ na anyị gaa na Playlọ Ahịa Google, enwere ụkọ nke n'ezie "dị ike" ma ọ bụ obere ngwanrọ dị mgbagwoju anya, ebe enwere ole na ole, mana leghaara anya ka ị ghara inye ahụmịhe ahụ na anyị na-amaliteworị ịjụ n'aka ngwaọrụ mkpanaka nwere nnukwu ngwaike.
Ugbu a, anyị nwere nke ọhụrụ akpọrọ KRITA ma nke ahụ na-eweta nke ọma na ihe niile anyị na-achọkarị na ngwa nke nwere ike ịbụ ezigbo ihe ọzọ na Adobe Photoshop. Dị ka anyị kwuru, naanị maka mbadamba na Chromebooks; n'ezie anyi nwere nwalere 6,8-gbakwunyere sentimita asatọ nke Note10 + na ọ pere mpe ka anyị jiri ya, ewezuga na ọ naghị ekwe ka anyị see n’oge ahụ.
Mepụtara ya site na KDE, mba ofesi ngwanrọ n'efu
Anyị ekwuola okwu banyere omume ọma ya na gburugburu oghe na nke ahụ emebere site na KDE, mba ofesi free software obodo. N'ezie anyị nwere ụdị desktọọpụ anyị nwere ike ibudata na nke ahụ abụrụla ezigbo usoro mmemme dị ka Adobe Photoshop.
Mana ekele maka beta ọhụrụ a, ndị ọrụ gam akporo nwere ike ịnwe ọ funụ na usoro usoro a maka ịbịaru na imewe dijitalụ. Bụ mbipute a tọhapụrụ na gam akporo bụ otu ihe ahụ dị ka 4.2.9 desktọọpụ. N'ezie, ọ nwere otu interface dị ka nsụgharị desktọọpụ ma ya mere ọ gaghị ekwe anyị omume ịbịaru ya site na sentimita 6,8 nke ihuenyo eji.
Ihe omuma ya
N'ezie, n'adịghị ka ụdị desktọọpụ nke nwere ọnụ ahịa, nsụgharị gam akporo bụ n'efu. Krita nwere Photoshop dị ka interface ma nwee ọtụtụ ihe karịrị atụmatụ ndị dị mkpa. Anyị na-ekwu maka ya 100 + brushes, stabilizer na ahịhịa iji dọpụta ahịrị ndị zuru oke, vektọ na ederede maka mgbọ ọchị (n'eziokwu ị nwere ike ịmepụta akwụkwọ ọhụụ ọhụrụ na ihuenyo akwụkwọ ọhụụ), ụdị 9 nke injinị ahịhịa, megharịa ọnọdụ maka textures na njikwa akụ maka ịbubata brushes n'etiti atụmatụ ndị ọzọ.
Mana anyị nwere ike ịga na ntọala ọrụ yana ịbịaru ndị na-enyere aka, onye njikwa oyi akwa, nhọrọ mara mma na mgbanwe, njikwa agba, Nkwado OpenGL, nkwado faili PSD (Photoshop's), eserese HDR, ederede Python, yana mmụta iji nweta ihe ngwa ngwa Photoshop ọzọ.
Beforenọ n'ihu ya Krita beta hapụN'ụzọ ezi uche, ọ na-abịa na chinchi, ya mere, ọ bụ ihe nke ọnwa tupu nsogbu ndị a ga-edozi na anyị nwere ihe ndị magburu onwe Photoshop-ịke ịbịaru na imewe ngwa anyị mbadamba; site na ihe anyị gụrụ ọ ga-abịarutekwa nke kachasị maka smartphones na obere nge ihu.
Developer: Ntọala Krita
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » KRITA bu ihe eji emeghe ihe ohuru nke emeghe ihe edere maka mbadamba gam akporo na Chromebooks
The OnePlus 8 bụ ekwentị mbụ na-enye gị ohere igwu egwu na 90 fps na Fortnite